SoftMaker FreeOffice inotangisa vhezheni nyowani nemamiriro erima | Linux Vakapindwa muropa
SoftMaker FreeOffice inotangisa vhezheni nyowani ine yakasviba modhi uye zvirinani kuenderana neMS Office
Ruzhinji rwevashandisi veLinux vanoziva uye vanoshandisa LibreOffice, hofisi suite iyo yakazvarwa kubva kuOpenOffice uye ikozvino yaiswa nekumisikidza muzvikamu zvakawanda. Asi kwenguva yakareba, kuchine vazhinji vanoda / vanoda kushandisa yakajairwa Hofisi, ndokuti, Microsoft. Nechikonzero ichocho pane dzimwe nzira senge SoftMaker FreeOffice, yemahara suite ine mubhadharo sarudzo ine chikonzero chekuve ndeyekuti hatipotse Microsoft Office.
Kuti uwane izvi uye pakati pezvimwe zvinhu, SoftMaker yakaburitsa vhezheni itsva ye FreeOffice, iyo yemahara sarudzo kubva kuSoftMaker Hofisi. Pakati pezvinhu zvitsva zvinosanganisirwa muchikamu chino tine nzira yakasviba inozofambisa basa dzimwe nguva apo mwenje wepakati wakadzikira. Pazasi iwe une tiivistelmä yeizvo SoftMaker FreeOffice inotipa pamwe chete nezvimwe zviviri zvitsva zveSeptember vhezheni.
Izvo SoftMaker FreeOffice inopa
Inowanikwa yeWindows, macOS, uye Linux mahara.
Feature-yakazara hofisi suite inoshanda kumba kana hofisi kushandiswa.
Inosanganisira TextMaker (Shoko), PlanMaker (Excel) uye Mharidzo (Powerpoint).
Inoenderana neyazvino Microsoft DOCX, XLSX uye PPTX mafomati pasina kukanganisa zvirimo.
Iyo vhezheni nyowani inowedzera isina musono yekuchengetedza mune yakasarudzika Microsoft DOC, XLS uye PPT mafomati, pamwe neiyo LibreOffice OpenDocument Chinyorwa (ODT) fomati.
Nyowani yakasarudzika yerima interface inodzivirira kumanikidza maziso ako munzvimbo dzakaderera mwenje.
Vashandisi vanofarira, tinogona kurodha SoftMaker FreeOffice 2018 970-01 kubva ku SoftMaker kurodha peji. Sezvatakataura mune rondedzero yezvinhu zviri pamusoro, inowanikwa yeWindows, macOS neLinux, ese ari mahara uye ekushambadzira vhezheni uye e32bit uye 64bit. Kana iri Linux, isu tine DEB vhezheni dzeDebian / Ubuntu, RMP yeRed Hat / Fedora uye inosimudza yemamwe masisitimu anoshanda atinogona kumhanya nekukwevera kune iyo terminal uye kudzvanya Enter.
Iwe uri mumwe wevashandisi vanofarira SoftMaker FreeOffice kana iwe unonamira neLibreOffice?
FreeOffice, rakanakisa yemahara hofisi suite yeLinux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » SoftMaker FreeOffice inotangisa vhezheni nyowani ine yakasviba modhi uye zvirinani kuenderana neMS Office
Mhosva yakabudirira yemari yekuvhurira sosi yakavhurwa
Maitiro ekuisa DeepFaceLab paLinux yekugadzira yakadzika mavhidhiyo